Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Ukufika okuyonwabileyo eSeychelles: Ukungcamla kweParadesi!
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Isibini esinethamsanqa eParadesi Seychelles
Xa uTim noMarlien Gentges bangena kwi-Qatar Airways ngenqwelomoya yeeyure ezili-12 ukusuka eJamani, babengazi kangako ukuba baya kuhlala eSeychelles ngoMvulo, ngo-Okthobha we-11, njengondwendwe olunethamsanqa lwe-114,859th, luphawula isiganeko esibalulekileyo sokuya kwiSiqithi sase-Indian Ocean kwaye ithathwe njengenani labatyeleli kulo nyaka ligqithise elo lika-2020.
Esi sibini sasinamalungiselelo amaninzi ekufuneka siwenze ngaphambi kokuba sihambe ngenxa ye-COVID-19 kwaye sasinexhala xa samiswa ekumiseni eSeychelles.
Emva koko bafumanise ukuba bayafakwa njengophawu lwesiganeko esibalulekileyo sendawo ekuyiwa kuyo.
Ngosuku lwabo lokuqala e-Mahé, iSebe lezoKhenketho liye lasindleka esi sibini kuhambo lokukhwela i-Mason's Travel's Anahita catamaran apho bayonwabele usuku oluzele lulonwabo.
Abathandi bohambo abakwiminyaka yabo yama-30, uTim, ongumdlali webhola yezandla oqeqeshiweyo kunye nepolisa, kunye noMarlien, utitshala wesikolo samabanga aphakamileyo, bahlala kwifama encinane eDusseldorf eJamani nezilwanyana zabo kwaye bayakonwabela ukuhamba kunye.
UMarlien uyakuthanda ukuhamba, ngelixa uTim wayengenamdla wokuqala ekuqaleni njengomsebenzi wakhe kunye neqela lezemidlalo wayengenalo ixesha elininzi lokuya kude nekhaya. Nangona kunjalo, emva kohambo lwabo lokuqala kunye eCanada, uye wathandana nokuhamba kunye nenkosikazi yakhe. Ngokudibeneyo okanye sodwa, esi sibini sityelele amazwe aliqela kwihlabathi liphela kubandakanya iCroatia, iFransi, i-Itali, iNetherlands, iOstriya, iSweden, iIreland, iSpain, iFiji kunye neSri Lanka. IiSeychelles yindawo yokuqala yesiqithi abaye baba kunye njengesibini.
UMarlien noTim, abadibana kumdlalo webhola yezandla xa babekwishumi elivisayo, batshata eJamani ngoJuni 6, 2020, baza bachaza indlela abakhetha ukuya kuyo. Ekubeni sasihambe kunye kuwo onke amazwekazi ngaphandle kwaseAfrika, esi sibini sasifuna ukuya kwiholide yomtshato kwilizwe laseAfrika; kulapho bafumanisa kwaye bakhetha iiSeychelles. Babecwangcise ukuza ngo-2020 emva komtshato wabo kodwa ngenxa yezithintelo zokuhamba ze-COVID-19 kwafuneka bamise izicwangciso zabo zokuhamba.
“Besiceba ukuza eSeychelles kanye nje emva komtshato wethu kodwa ngenxa ye-COVID oku akwenzekanga, ke sicebe ukuya ku-2021 okanye ngo-2022,” utshilo uMarlien eveza ukuba xa babecwangcisa ihoneymoon yabo wayefuna ukuza eSeychelles, kwaye. U-Tim wayengaqinisekanga kakhulu, kodwa ekufikeni kwabo, bobabini babephezu kwenyanga ukuba ibe yinto efanelekileyo yokukhetha.
“Sivuya kakhulu ngokufika kwethu kuba kusifumene ukuba sisibini esinethamsanqa lokuphawula isiganeko esibalulekileyo eSeychelles,” utshilo uMarlien.
Babenamalungiselelo amaninzi ekufuneka bewenzile ngaphambi kokuba bahambe ngenxa ye-COVID-19 kwaye babenexhala xa bamiswa ekufikeni eSeychelles, bafumanisa ukuba babeza kugqalwa njengophawu olubalulekileyo lwendawo ekuyiwa kuyo.
“Sasingakholelwa ukuba siyinombolo yethamsanqa, yayiphambene. Yamkelekile kwaye inobubele kakhulu. Wonke umntu usixelela ukuba abantu baseSeychelles banobuhlobo kakhulu kwaye siyavuma,” uMarlien noTim batsho ngovuyo.
Isibini esasiseSeychelles kangangeentsuku ezisi-8 sathi sasijonge ukufumana amava amaninzi eziqithi kangangoko sinako kwaye sinandipha ukutya kwe-creole.
Ngosuku lwabo lokuqala e-Mahé, iSebe lezoKhenketho lisindleke esi sibini kuhambo lokukhwela i-Mason's Travel's Anahita catamaran apho bonwabele usuku oluzele lulonwabo lokuhlola ezimangalisayo zeSeychelles amanzi eSt. Anne Marine Park.
Besebenzisa iglasi yenqanawa engatshoniyo ngaphantsi kwamanzi, babukela intaphane yeentlanzi zale tropiki, izidalwa ezihlala kwimiyezo yekorale enemibalabala yale paki. Oku kwalandelwa kukuqubha kumanzi afudumeleyo afurquoise, ukondla iintlanzi ezazisondela kufutshane njengoko zazirhubuluza kwipaki yolwandle.
U-Tim noMarlien bayonwabele ngokukhethekileyo isidlo sabo sasemini se-creole kunye nokuzonwabisa komculo liqela le-Mason's Travel ngaphambi kokuba baye elunxwemeni ukuze bahlole iSiqithi saseMoyenne kunye nezityalo nezilwanyana ezimangalisayo. UMarlien wayevuya kakhulu kukubona nokudibana noFudo Olukhulu oluzula-zula ngokukhululekileyo kwindawo leyo kwakunye nosana olukwigumbi lokufundela abantwana. “Ndingaphawula ukudibana nofudo olukhulu kuluhlu lwam lweeholide; Ndonwabe kakhulu,” utshilo.
Esi sibini senze uninzi lokuhlala kwabo, i-kayaking kunye ne-snorkeling, kunye nokuqubha kwi-rock pool edumileyo kwi-Bliss Hotel Glacis kunye nokutyelela i-La Digue Island apho babejonge phambili ukuhamba ngebhayisikili ejikeleze isiqithi.
UMarlien noTim bathi imbuyekezo ikumakhadi, kwaye bangafuna ukubuyela eSeychelles, nabahlobo okanye usapho.